राजा वीरेन्द्रले गाडी नपाएर आफ्ना सन्तान सहित सडकमा अलपत्र परेका दम्पतीलाई यसरी लिफ्ट दिएका थिए – Khabarhouse
राजा वीरेन्द्रले गाडी नपाएर आफ्ना सन्तान सहित सडकमा अलपत्र परेका दम्पतीलाई यसरी लिफ्ट दिएका थिए
Khabar house | ११ माघ २०७६, शनिबार ०५:४९ | Comments
काठमाडौं । मुलुकमा राजसंस्था अन्त्य भएको एक दशक नाघिसकेको छ । तर, शाहवंशीय राजाहरुको सकारात्मक कुराहरु सामाजिक सञ्जालमा भने आइरहेका छन् । मुलुकको अन्तिम शाहवंशीय राजा ज्ञानेन्द्र बने । उनका दाजु राजा वीरे न्द्रको २०५८ जेठ १९ गते भएको राजदरबार हत्याकाण्डमा वंशनाश भयो । उनै राजा वीरेन्द्रसहित उनको पूर्खाको सकारात्मक कुराहरु सामाजिक सञ्जालमा आइरहेको छ ।
यसैक्रममा शुक्रबार रागव शम्शेर राणाले राजा वीरेन्द्रको तस्विरसहित एक महिलालाई लिफ्ट दिएको सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन। उनका अनुसार २०५६ सालको दशैंको टीकाको भोलिपल्ट साँझ पर्न लागेको बेला सडकमा बच्चासहित गाडी कुरेर बसेकी महिला लाई राजा वीरेन्द्रले लिफ्ट दिएका थिए । रागव राणाले फेसबुकमा लेखेका छन्, ‘दसैं टीकाको भोलिपल्ट २०६५ साल साँझ पर्न लागेको थियो ।
नुवाकोट ककनी हुँदै काठमाण्डौं छिर्ने सडकमा सार्वजनिक यातायातका गाडी त्यत्ति गुडेका थिएनन् । एकान मध्ये सबै साधन दसैंमा जाने आउने यात्रुले ठेलम ठेल थिए । गन्तव्यमा पुग्न सार्वजनिक साधन कुरेर बसेका यात्रुका लागि ठाउँ पाउन मुश्किल थियो ।यस्तै मा यौटा कार ककनी हुँदै ओशोतपोवन रहेको गोलढुङ्गा फर्याङ आइपुग्यो । गाडीमा तीन यात्रु थिए । एक जना चालकसँगैको सिटमा उनकी श्रीमती, पछिलतिरको सिटमा सैनिक बर्दी लगाएका अर्को एक पुरुष कार चालकको आँखा गाडी नपाएर निराश र हताश मुद्रामा अघि बढिरहेको एक दम्पतीतिर पर्यो ।
ति मध्ये पतिले एक बालक बोकेका थिए भने बाँकी केटाकेटी हिँड्दा हिँड्दै थकित भैसकेकी पत्नीले समाइ रहेकी थिइन् । गाडी नपाएर यस्तो सास्ती भोगिरहेकी दम्पतीको अघि ल्तिर कार रोकियो । चालकले लोग्ने मान्छेसँग सोधे कहाँ पुग्ने हो ? उनले जवाफ दिए भक्तपुरको सुडाल । चालकले बच्चासहितको दम्पतीलाई कारमा बस्न अनुरोध गरे । अनि बालाजु बाइपाससम्म ल्याएर छाडिदिए ।
त्यस कारका चालक अरु कोही थिएनन्, स्वर्गीय राजा श्री पाँच बिरेन्द्र थिए। सँगै साथमा थिइन् रानी ऐश्वर्या, कारको पछिलतिरको सैनिक बर्दीवाल राजा वीरेन्द्रका एडीसी महासेना सुन्दर प्रताप राणा थिए।’ यस्तो छ उनको स्टाटस -दसैं टिकाको भोलि पल्ट 2056 साल साँझ पर्न लागेको थियो। नुवाकोट ककनी हुँदै काठमाण्डौं छिर्ने सडकमा सार्वजनिक यातायातका गाडि तेति गुडेका थिएनन्!एकान मध्ये सबै साधन दसैंमा जाने आउने यात्रुले ठेलम ठेल थिए!!
गन्तव्यमा पुग्न सार्वजनिक साधन कुरेर बसेका यात्रुकालागी ठाउँ पाउन मुश्किल थियो!!यस्तैमा यौटा कार ककनी हुँदै अोसितपओन रहेको गोल ढुङ्गा फर्याङ आइपुग्यो। गाडिमा तिन यात्रु थिए। एक जना चालक संगैको सिटमा उन्कि श्रीमती, पछिलतिरको सिटमा सैनिक बर्दी लगाएका अर्को एक पुरुष कार चालकको आँखा गाडि नपाएर निराश र हताश मुद्रामा अघि बढिरहेको एक दम्पती तिर पर्यो। ति मध्ये पतिले एक बालक बोकेका थिए भने बाँकि केटाकेटी हिड्दा हिड्दै थकित भैसकेकी पतनिले समाइ रहेकि थिइन्!!
गाडि नपाएर यस्तो सास्ती भोगिरहेकी दम्पती कि अघिल तिर कार रोकियो। चालकले लोग्ने मान्छे सङ्ग सोधे कहाँ पुग्ने हो? उन्ले जवाफ दिए भक्तपुरको सुडाल!चालकले बच्चासहितको दम्पतीलाई कारमा बस्न अनुरोध गरे!! अनि बालाजु बाइपास सम्म ल्याएर छाडि दिए। तेस् कारका चालक अरु कोहि थिएनन्। स्वर्गीय राजा श्री पाँच बिरेन्द्र थिए, संगै साथमा थिइन रानि ऐश्वर्या!!
कारको पछिलतिरको सैनिक बर्दीवाल राजा बिरेन्द्रका A D C महासेना सुन्दर प्रताप राणा थिए। यो थियो स्वर्गीय राजा श्रीपाँच बिरेन्द्रको सहयोगी नमुना।। बोलि बचनमा पनि सालिन सक्तिको दम्ब र बडापनबाट नि टाढै थिए राजा बिरेन्द्र। आफुबाट सानोतिनो स्वभा विक गल्ती हुँदा माफि माग्न हिचकिचाउदैन थिए राजा बिरेन्द्र!! जय देश जय नरेश
भरतपुरमा स्मार्ट सडक बत्ती जडान, शहरी क्षेत्र उज्यालो हुन थाल्यो
बन्यो तीन वटा जिल्ला जोड्ने तीनमुखे पुल, बढ्यो जश लिनेहरूको हुल
रणवीरको जुत्ता लुकाए बापत सालीहरूले मागे ११ करोड ५ लाख
सीवाइसी नेपालको आईपीओमा पर्यो १४ गुणा बढी आवेदन , ९२ प्रतिसतको हात खालि हुने !
अब ट्याक्सीमा चडेर प्रतीक्षा गरेको पनि शुल्क लाग्ने, कति तिर्नुपर्छ ?
बुध्द एयर चढ्नेले अन्नपूर्ण केबलकारमा १२ प्रतिशत छुट पाउने